Moe Kai: August 2013
အိမ်က ကားက အသက် နဲနဲ ကြီးလာပြီဆိုတော့ သူလဲ အိုနာသေဘေး မကြုံသေးခင် ဒီရက်ပိုင်း ကားအသစ်လဲရမလား စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဆောင်းဝင် နှင်းကျရင်လဲ နှင်းပေါ်မှာမောင်းလို.ရတဲ့ ကားမျိုးလဲ လိုတာကြောင့် ကားအသစ်တွေ လျှောက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာက မြန်မာမှာလို ကားဝယ်ပြီး မြတ်တယ်ဆိုတာ မရှိ။ ပြန်ရောင်းရင် ရှုံးတာချည်းပါ။
အခု ပြောပြချင်တာကတော့ ကားတွေရဲ. နောက်ဆုံးပေါ် Technology တွေပါ။ မနှစ်က မြန်မာပြန်တော့မှ ကားတွေမှာ DVD Players တွေ၊ နောက်ကြည့် ကားပါကင် ကင်မရာတွေဆိုတာ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ အဲဒါတွေ အဲလောက် အသုံမများ ကြပဲကိုး။
အဲ အပြောစောလို. မဖြစ် အခု ကားလိုက်ကြည့်မှ အင်္ဂလန်က ကားတွေကလဲ Video player, video parking sensor တွေ တပ်ထားတာ တွေ.ရတဲ့ အပြင် စတီရီယိုဘောက်စ်ကြီးတွေနဲ. Music interphase ဆိုတာတွေ။ ကိုယ်သွားလိုရာ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ Sat nav တွေ တပ်ထားတာ တွေ.ရပါတယ်။ ဖုန်းကိုလက်နဲ.ကိုင်ပြောစရာမလို၊ ကားစတီရီယာဘီးက ခလုပ်ကလေးတွေ နှိပ်လိုက်တာနဲ. ကားရဲ. စပီကာကနေ ဖုန်းခေါ်ပြီး လေပစ်မလား၊ သူများခေါ်လာတာကို ပြန်ဖြေရမလား၊ ဖုန်းထဲမှာ ကူးထားတဲ့ သီချင်းတွေ ကားထဲက Soundbox ကြီးကနေ နားထောင်မလား။ တချို.ကားတွေဆို ခလုပ်နှိပ်စရာမလို။ “ဟေ့ ငါ့ကို ကော်ဖီဆိုင် ကို လမ်းညွှန်ပေး” “ဘယ်အဆိုတော် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းကိုဖွင့်” “မောင်ဘယ်သူဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်” အစရှိသဖြင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကားကို ပြောလိုက်တာနဲ. ကားက သူ.အလိုလို လုပ်ပေးပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ကားက ခလုပ်ကလေးတချို.တွေကို နှိပ်ထားလိုက်ရင် ကားက သူ.ဘာသာသူ မောင်းပါသေးတယ်။ ကိုယ်က ဘေးကကားနဲ. တအားကပ်လာရင်၊ လမ်းပေါ်က ဆေးဖြူလမ်းကြောင်းနဲ. ကပ်နေရင် ကားကပဲ သူ.ဘာသာသူ လမ်းတဲ့အောင် ပြန်လုပ်ပေးတယ်။ ရှေ.က ကားနဲ သိပ်ကပ်နေရင် ကားကပဲ သူ.ဘာသာသူ အရှိန်လျှော့ပေးတယ်။ ပါကင် မကျွမ်းကျင်သူတွေ ကားက အော်တိုနဲ. ပါကင်လုပ်ပေးတယ်။ ကားထဲက ခုံမှာတောင် ညောင်းလာရင် နှိပ်ပေးတဲ့ Function ပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ တယောက်က အဲဒီကားကို Review လုပ်ထားတာ “အေး အဲဒီလောက် Function တွေ အများကြီးပါနေတော့ နောက်ဆုံး တခုပဲလိုတာက၊ လိုရာခရီးကို ရောက်လို. Driver အိပ်ပျော်နေရင် တိန်ဆိုပြီး ရာဘာတုန်းကလေးနဲ. ခေါင်းခေါက်နှိုးပေးရမယ့် Function ပဲ လိုတော့တယ်တဲ့”
ကျမတို. ဘယ်ကား ဘယ်လောက် တတ်နိုင်မယ်တော့ မသိသေးပါ။ တိုးတက်လာတဲ့ Technology တွေအကြောင်း အံ့သြ စိတ်ဝင်းစားမိလို. ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဆေးရုံသစ်မှ အထင်မှားမှု တခု
ဒီနေ. ဆေးရုံ အသစ်မှာ အလုပ်အသစ် စပါတယ်။ ကျမရဲ. အလုပ် အတွက် အတွေ.အကြုံယူဖို. "Spinal Surgery" လို.ခေါ်တဲ့ ခါးနောက်မှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြော ခွဲစိတ်တဲ့ ဋ္ဌာနမှာ ၂ပတ် သွားရမှာပါ။ ဆေးရုံက တကယ့် Tertiary Specialist Centre ကိုသွားရတာဆိုတော့ ကျမအိမ်နဲ. မိုင် ၇၀ လောက် ဝေးပါတယ်။ ကားမောင်းသွားတော့ အသွား ၁နာရီခွဲ အပြန် ၁နာရီခွဲ ကြာပါတယ်။
ဒီနေ. ပထမဆုံး အလုပ်စတဲ့နေ.ဆိုတော့ အားလုံး တွေ.သမျှ လူအသစ်၊ နေရာ အသစ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း Consultant ကိုသွားနှုတ်ဆက်။ သူက မနက်ခင်း ဆေးရုံဆောင် Inpatients မှာ ခဏကြည့်ထားတဲ့။ အဲဒါနဲ. ဆေးရုံ အဆောင်ထဲကိုသွား။ လူနာ တွေ review လုပ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆေးရုံဆောင်ထဲကို အသက် ၅၀လောက်ရှိမယ့် သားသားနားနား ရှပ်အင်္ကျံ အဖြူနဲ. လယ်ပင်း နက်တိုင်နဲ. လူတယောက်၊ သူနောက်မှာ ခက်ရွယ်ရွယ် လူတယောက်နဲ. အသက် ၂၀လောက်ရှိတဲ့ လူငယ်လေး တယောက် နောက်က လျှောက်လိုက်လာပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကျမ စိတ်ထဲ မြင်မိတာက တကယ့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ. နောက်လိုက် ၂ယောက် လမ်းလျှောက်ဝင်လာတဲ့ စတိုင်။ (အင်္ဂလန်မှာ ဆရာဝန်တွေ White coat မဝတ်ပါ။ ဆရာဝန် အများစုက ရှပ်အင်္ကျီလက်ခေါက်နဲ.။ တချို.က Necktie ပါ ဝတ်ကြပါတယ်။ ဆေးပညာက ဆရာဝန်တွေကတော့ Stethoscope ကို လည်ပင်းဆွဲ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် အများစုက Clinic ထိုင်ရင် Suit နဲ. ဝတ်တတ်ကြပါတယ်)
အဲကျမစိတ်ထဲ ထင်လိုက်တာက Consultant wardround လာတယ်၊ Ward ထဲမှာ သူတို. ၃ယောက်သား ဘာကိုမှန်း မသိ အလိုမကျ ဖြစ်နေပုံရတာနဲ. ကျမလဲ ဘေးမှာ သူနာပြုတွေနဲ. မေးတာ စမ်းတာ မလုပ်မိပဲ၊ လျှာရှည်ပြီး သွားကူညီ လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ. လမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့ ကျမကိုယ်ကျမ ခပ်တည်တည်နဲ. မိတ်ဆက်ပြစ်လိုက်တာ
“ဟဲလို ကျမနာမည်က .. .. ဘယ်မှာလုပ်ပါတယ် .... ဘယ် Year ရောက်ပါပြီ။ အခု Spinal ကို ၂ပတ် လုပ်ငန်းခွင် လာသင်ယူတဲ့ သဘောပါ။ အခု ဒီ Ward ထဲ မှာပါ။ လူနာတွေနဲ. လျှောက်ကြည့်နေတာပါ ........” တောက်လျှောက် တော်တော် ပြောချ မိတ်ဆက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အဲဒီ ကျမ Consultant Surgeon လို.ထင်တဲ. သူက ကျမကို အူကြောင်ကြောင်နဲ. ပြန်ကြည့်ပြီး ခေါင်းတချက် ငြိမ့်ပြပါတယ်။ သူနာမည်လဲ မပြော ပြန်လဲ မိတ်မဆက်။ ကျမထင်တာက ထုံးစံအတိုင်း Surgeon ပီပီ ရိုင်းပြန်ပြီလို.ထင်လိုက်တာ။
ဒါနဲ. ကျမလဲ ”သြ နင်က Consultant Spinal Surgeon တယောက်လား” မေးလိုက်တော့မှ သူက သဘောပေါက်သွားပုံနဲ. ပြုံးဖြီးဖြီးလုပ်ပြီး “ဟုတ်ဘူး ငါတို.က ဒီဆေးရုံရဲ. Porter တွေ” တဲ့။ မှတ်ကရော ....။
ဆေးရုံတွေမှာ ပစ္စည်းသယ်ပို. လူနာကုတင်တွန်း လူနာတွေကို ဓါတ်မှန် ခွဲခန်း အစရှိသဖြင့် ပိုပေးတဲ့ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေ တော်တော် များများလုပ်တဲ့ Porter တွေဆိုတာ အများကြီး ရှိတာလေ။ ဒီ အဖွဲ.လောက် သားသားနားနား ဝတ်ဆင်တာတော့ အရင်က ကျမ မမြင်ဘူး။ ကျမ အထင်မှားလဲ မှားစရာပေါ့နော်။
အဲဒီ ကျမလဲ အရှက်ပြည် ရယ်ကျဲလေးနဲ. အလာပ သလာပ ပြောပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။
ပြောပြန်ရင်လဲ အောင်မင်း လွန်ရာကျမယ်။ တနေ.က ဟင်းချက်ဖို. အိမ်မှာ “ပူစီနံ” လိုချင်လို. အမျိုးသားကို အလုပ်ကပြန်လာရင် ဝင်ဝယ်ခဲ့ဖို.မှာမိပါတယ်။ အမျိုးသား ကျမကို ပြန်မေးတာက ပူစီနံကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ ... “Smelly ပူစီ” လို.ခေါ်လားတဲ့။ သေရော ... ကျမမှာ ရယ်လိုက်ရတာ ဆိုတာလေ။ တော်သေးတယ် ဆိုင်မှာ အဲဒီလိုသွား မမေးမိလို.ပေါ့။
ဒီအင်္ဂလန် ရောက်ခါစက အသိ ဦးလေး ဆရာဝန်ကြီး တယောက်က ပြောပြတာလဲ ပြန်တွေးမိသွားတယ်။ သူလဲ ရိုးရိုးသားသား ဖိုးသခွားလေး ဆိုတော့ ပူစီဆိုရင် ကြောင်လေးတွေကို ချစ်စနိုးခေါ်တာပဲ သိတာပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေရဲ. အောက်ပိုင်း အင်္ဂါရပ်ကို ခေါ်တာ၊ တယောက်နဲ. တယောက်ဆဲဆိုရင် ဗန်းစကား အနေနဲ. သုံးတတ်တာမျိုးတွေ မကြားဖူး မသိဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ သူ.ငှားထားတဲ့ အိမ်က အိမ်ရှင် အဖွားကြီးရဲ. ကြောင်လေးကို ကြည့်ပြီး အဖွားကြီးကို “your ပူစီ is beautiful” သွားပြောမိလို. ...... တော်သေးတယ် ရဲစခန်း မရောက်သွားရတာတဲ့။
မထင်မှတ်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရယ်စရာ အတွေ.အကြုံလေးပါ။
ပြီးတော့ ပူစီနံကို အင်္ဂလိပ်လို. Mint လို.ခေါ်ပါတယ်။ ကျမ အမျိုးသားလဲ အခုတော့ သိသွားပါပြီနော်။ ဟီးဟီး။
ဒီရက်ပိုင်း ကျမ ဝတ္ထုကိုက်နေပါတယ်။ အားလွန်းလှလို.ရယ်တော့ မဟုတ်။ ဒီလိုပဲ အီးအီးပါရင်းဖတ်၊ မနက် သွားတိုက်ရင်းဖတ်၊ စားရင်းသောက်ရင်း ရထားစီးရင်းဖတ် အဲလိုဇွဲရှိရှိနဲ.အသဲအသန်ကို ကြိုးစားပြီး ဖတ်နေတာပါ။
ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ Lee Child ရဲ. Jack Reacher ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ Jack Reacher ကတော့ မင်းသား ဟီးရိုးပေါ့လေ။ သူက အမေရိကန် စစ်တပ်ထဲက ရဲအရာရှိဟောင်း။ စစ်တပ်ထဲ မှာမွေး၊ စစ်တပ်မှာ ကြီးပြင်းပြီး၊ သူကိုယ်တိုင် Military Police ဖြစ်လာ။ စစ်တပ်က စစ်သားတွေ မဟုတ်တာလုပ်ရင် ဖမ်းရ စုံစမ်းရတဲ့သူ ဆိုတော့ သူက အရမ်းတော်တယ်၊ ထက်တယ်၊ သန်တယ် မြန်တယ် ဆိုပါတော့။ စစ်တပ်က အနားယူပြီးထဲက အမေရိက တခွင် လျှောက်သွားရင်း တွေ.ရကြုံရတဲ့ မှုခင်းတွေကို စုံးစမ်း ဖော်ထုပ်နေတဲ့သူ ဆိုပါတော့။ သူ.ရဲ. စာအုပ်ပေါင်း ၁၆အုပ်ထဲက တအုပ်ကို Tom Cruise နဲ. Jack Reacher ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ. ရုပ်ရှင် ရိုက်ထားပါသေးတယ်။
အဲဒီတော့ အရင် ဝတ္ထု ရုပ်ရှင်ထဲက ကျမ အလွန် သဘောကျ နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အကြောင်း ပြန်တွေးမိပါတယ်။ ဘယ်သူက အစွမ်းဆုံး ဖြစ်မလဲလို.လဲ စဉ်းစားမိတယ်။
ကျမရဲ. အကြိုက်တကာ့ အကြိုက်ဆုံးတွေ ထဲမှာတော့ Sherlock Holmes ပေါ့နော်။ ရှိသမျှ ဝတ္ထုအားလုံး ဖတ်ဖူးသလို၊ အခေတ်ခေတ် အခါခါ ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ သူ.ရဲ.ရုပ်ရှင် ပေါင်းစုံလဲ ကျမကြည့်ဖူး ပါတယ်။ သူ.ကို ဖန်တီးပေးတဲ့ ကလောင်ရှင် Sir Arthur Conan Doyle ရဲ. ကိုယ်ရေး အထုတ်ပတ္တိတောင်မကျန် ဖတ်လိုက်သေးတယ်။
James Bond ဆိုရင်လဲ လူတိုင်းသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ Ian Fleming ကနေ မွေးထုတ်ပေးလာတဲ့ MI6 ရဲ. 007 Special agent သူရဲကောင်း။ သူ.ရဲ. ရုပ်ရှင်တွေတော့ မကြည့်ဖူးတဲ့သူ အတော် နဲပါလိမ့်မယ်။ အဟမ်း အဟမ်း .. ကျမ ဖခင်ကြီးဆိုရင် James Bond ရုပ်ရှင်အားလုံး ကိုယ်ပိုင် ဝယ်ထား စုထားပါတယ်။
နောက် Jason Bourne။ သူကိုတော့ ကျမ စာအုပ်တော့ မဖတ်ဖူး။ ဟောလိဝုမင်းသား Matt Damon နဲ. ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကနေ စသတိထားမိတာပါ။ အစိုးရရဲ. လျှို.ဝှက်အဖွဲ.အစည်းရဲ. Operation Treadstone ဆိုတာကနေ မွေးထုတ်လာပြီး၊ သူကိုယ်တိုင်က အတိတ်မေ့နေတဲ့သူပါ။ အော်ရင်ဂျီနယ် စာရေးဆရာနာမည်က Robert Ludlum တဲ့။ မင်းသား Matt Damon နဲ.ရိုက်ထားတာ ရုပ်ရှင် ၃ကားရှိပါတယ်။ Bourne Identity, Borne Spremacy, Bourne Ultimatum မကြည့်ဖူးရင်၊ အက်ရှင်ကားလဲ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။
နောက်တယောက် ထပ်ပြောရဦးမယ်ဆိုရင် Mission Impossible ထဲက Ethan Hunt။ Tom Cruise ပဲ မင်းသားလုပ်ပြီး ရိုက်တာပါ။ IMF လို.ခေါ်တဲ့ အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ.အစည်း တခုရဲ. အတော်ဆုံး Agent ဆိုပါတော့။ ရုပ်ရှင် ၄ကားလုံးကို အနဲဆုံး ၃ခေါက်ထပ်မနဲ ကျမပြန်ကြည့်ဖူးပါတယ်။
နောက်ဆုံး တယောက်အနေနဲ.ကတော့ အမေရိကန် ရောင်းအကောင်းဆုံး နာပါတ်တစ် စာရေးဆရာ Dan Brown ရဲ. ဇတ်ကောင် Professor Robert Langdon ပါ။ သူကတော့ အနည်းငယ် ထူးခြားစွာ အတိုက်အခိုက်သမား မဟုတ်၊ ဟားဗဒ် တက္ကသိုလ်ရဲ. ပရော်ဖက်ဆာ။ ရှေးရာဇဝင် Symbol လက္ခဏာတွေကို လေ့လာတဲ့သူ။ ဝတ္ထုတွေ အားလုံးက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို. ကောင်းပေမယ့်၊ တိုက်ခန်း ချခန်းတွေတော့ သိပ်မပါပါ။ စာရေးဆရာက အချိန် အများကြီး စိုက်ထုတ်ပြီး တကယ် ဖြစ်ရပ်မှန် အချက်အလက်တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီး ရေးထားတာဆိုတော့ တခါတလေ ဒါဖြစ်ရပ်မှန်လား၊ ဇတ်လမ်းသဘာပဲလား ဆိုတာ ခွဲရခက် အတွေးပိုစရာ။ ဥပမာ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်က Jesus Chris ရဲ. ဘဝကို အခြေထားပြီး နောက်ဆုံးမှာ Jesus Chris ကမွေးပြီး သက်ဆင်းလာတဲ့ မျိုးဆက်ပဲ ရှိနေသလိုမျိုး ရေးထားတော့ အတော်လေး ဝေဖန်သံတွေနဲ. ဗရုတ်ဗရက် ဖြစ်သွားရပါသေးတယ်။ ဒုတိယ ဝတ္ထုကတော့ Pope ရဟန်းမင်းကြီးနဲ ရောမ Vertican မှုာ အခြေခံထားတာ။ တတိယ လောလောဆယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်နေဆဲကတော့ လူ.တွေရဲ. စိတ် Human Mind ကို အခြေပြုထားတာ၊ တချို.နေရာတွေများဆုိုရင် မင်းသိင်္ခ ဝတ္ထုတွေနဲ.တောင် ခပ်ဆင်ဆင်။ အခု တလောလေးမှာ နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ ဝတ္ထုကတော့ Exponential Population growth လူဦးရေ မထိန်းချုပ်နိုင် အဆမတန် ပွားများလာခြင်းနဲ. ကမ္ဘာကြီးရဲ အနာဂါတ်ကို တွက်ချက်ပြထား အခြေခံထားတာပါ။ ဒီဇတ်ကောင်ကိုတော့ ဟောလီးဝုမင်းသား Tom Hank က Professor Langdon အနေနဲ. သရုပ်ဆောင်ပြီး ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားတာ ၂ကားရှိပါတယ်။ ၃ကားမြောက်က ရိုက်နေဆဲ ဆိုပါတယ်။
ကဲ ငယ်က ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Superman Batman Spiderman ဆိုတာတွေ မပါတော့ပါ။ အခုတွေးမိ ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့ ကျမ နှစ်သက်တဲ့ ဇတ်ကောင် ဟီးရိုးတွေပါ။ သူတို.တွေသာ တကယ့်ဘဝမှာ သက်ရှိထင်ရှားဆိုရင် လောကကြီးဟာ ပိုလို.တရာမျှတတဲ့ နေရာရပ်ဝန်း ကြီးများဖြစ်လာမလား မသိ။